TogaHerer: AL-SHABAAB HALIS MA KU TAHAY SOMALILAND????
Al-shabaab Halis Ma’kutahay Somaliland?
Aduunka waxa ka jira habab ay uga hortagaan khattaraha soo foodsaara,sida masiibooyinka dabiiciga ah, argagaxisada, abaaraha iyo wixii la mida. Aduunyada hore u martay waxa ka jira in dawladuhu ay si aad u heersarraysa u ilaashaan ammaanka shacabkooda iyaga oo adeegsanaya maaliyado iyo xirfado heersarreeya. Tiiyo intaasiba jirto hadana waxa wada shaqayn leh amma kaalin wayn ka ciyaara ammaanka shacabka oo gacan ka siiya hay’adaha ammaanka wax kasta oo khattar gelinkara ammaankooda guud ahaaneed iyo kooda gaar ahaaneedba, sida tuugada, dilka, boobka, kufsiga iyo wixii la halmaala.
Waxaan hadaba u ga golleeyahay gooraalkaygan waxa jirta khattar aad iyo aad u halis ah oo ku soo foolleh ammaba dhib u gaysatay Somaliland. Dhibtani oo ka timi amma ka imankarta dhaqdhaqaaqa uruka Al-shayaadiin(Al-shabaab) oo ka geeystay xasuuqii ugu xumaa taariikhta Somaliland intii ka dambaysay xinjire quutihii ina Siyaad barre.Waa cadaw mannaxaan ah, oo halis ku haya nafteenna, sharafteen, qarannimadeenna, amnigeenna, horu markeena, ubadkeenna. Haddaba inkasta oon san maqal istiraatiijid cadd oo dawladda Somaliland ka leedahay ka hortagga halistaasi, waxa iyana is waydiin leh kaalin intee le’eg ayay shacabku halistan ka ciyaarikaraan-Culimada, ganacsatada, dhalinyarada, haweenka, aqoonyahanka kale ee wadanka jooga intuba kaalintee u bannaan inay ka ciyaaraan. Se halis ma ku tahay Al-shabaab Somaliland? Sidee se looga hortegayaa?
Posted by togaherer at 22:26
Adams Kevin 10 September 2014 at 03:12